စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေး - ဒီခေတ်သစ်တွင်အခမဲ့ဆော့ဝဲ၏အခန်းကဏ္ | Linux မှ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအမျိုးမျိုးသောအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကဏ္sectorsများသည်ဤကာလအတွင်းအကြီးအကျယ်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲမှုကိုကြုံတွေ့နေရသည် စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေး။ ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတော်လှန်ရေး «nuevas tecnologías» ကြောင်းရှိပြီးသားပေါင်းစပ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကမ္ဘာများအားလုံးသက်ရောက်မှုသော စည်းကမ်းများ, စီးပွားရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အဘယ်သို့သောအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်။ ရှိပြီးသားအတွေးအခေါ်များကိုစိန်ခေါ်ရန်အထိဝေးတတ်၏ လူသား.
ဤသည်၌ စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေး၊ လက်ရှိ ကိရိယာများဂေဟစနစ် (လျှောက်လွှာများ၊ စနစ်များနှင့်ပလက်ဖောင်းများ) သည် «Software Libre y Abierto» ကပြောသည်၏မွေးစား «nuevas tecnologías»ခွင့်ပြု, အဖွဲ့အစည်းများ ပိုပြီးဖြစ်နိုင်တယ် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်း ဒီအချိန်တွေမှာ သော်လည်း လူ့အချက် ၎င်းသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့်ဤကိရိယာများ၏လေ့ကျင့်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများ: "ဒေတာသည် ၂၁ ရာစု၏ရေနံဖြစ်သည်" ဒီအတွင်းအကြီးဆက်စပ်မှုကြာပါသည် စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေးဒီကတည်းကနောက်ဆုံးပေါ်နှင့် «nuevas tecnologías» လုပ်ငန်းအဆင့်တွင်သာမကထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီတွင်ဖြစ်စေ၊ အဖှဲ့အစညျး
တိကျစွာ၊ «Software Libre y Abierto» တွင် အဖွဲ့အစည်းများ နေ့တိုင်းဒီနည်းပညာအသစ်များသည်မျက်နှာသာ ပေး၍ တတ်နိုင်သော (သို့) သုညကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးသည် စီးပွားရေးရည်မှန်းချက် တစ်ခုချင်းစီ၏။
လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်က၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (Davos ဖိုရမ်) ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကောက်ချက်ချခဲ့သည် "ကမ္ဘာကြီးသည်စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေးနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်"။ ၎င်းတွင်အင်တာနက်သည်၎င်း၏တီထွင်မှုအစတွင်လူ့အသက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိတော့ဘဲလက်တွေ့ကျသောအခြားအဖြစ်အပျက်များအဖြစ်အမှန်တကယ်တည်ရှိကြောင်းကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
“ လက်ရှိအသွင်ကူးပြောင်းမှုများသည်တတိယစက်မှုတော်လှန်ရေးကိုတိုးချဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ အကြောင်းအရင်းသုံးရပ်ရှိသည်။ သို့သော်အခြားပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်း - မြန်နှုန်း၊ အတိုင်းအတာနှင့်စနစ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ လက်ရှိတိုးတက်မှုအမြန်နှုန်းသည်သမိုင်းတွင်မကြုံစဖူး…တိုင်းပြည်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းနီးပါးကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ”
ထိုသို့ Klaus Schwab၏အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် နှင့်စာရေးဆရာ စာအုပ်«စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေး»စာအုပ်ဒီတော်လှန်ရေးအသစ်
၎င်းကိုအသစ်ပေါ်ထွန်းလာသည့်နည်းပညာအစုတစ်ခုအနေဖြင့်သတ်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ (ယခင်) ဒစ်ဂျစ်တယ်တော်လှန်ရေး၏အခြေခံအဆောက်အအုံတွင်တည်ဆောက်ထားသောစနစ်သစ်များသို့ကူးပြောင်းခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်များစွာသောအကြား ဒေသများသို့မဟုတ်နည်းပညာများ လက်ရှိမှတဆင့်အပြေး အင်တာနက်ကို သို့မဟုတ်သူတို့ကအပေါ်ကိုကျိန်းဝပ်လျက်, သူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ပေးသို့မဟုတ်ရှင်းလင်းစွာဒီသတ်မှတ်သူမြားဖွစျသညျ စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေးကျနော်တို့ဖော်ပြထားနိုင်ပါတယ် အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာ အောက်ပါ:
Artificial Intelligence နှင့်စက်ရုပ်
5G ကွန်ယက်များနှင့် WiFi ကွန်ယက်များ 6
ဇီဝနည်းပညာ, နာနိုနည်းပညာနှင့် Neurotechnology
Tele- ဆေးပညာ, Tele- ပညာရေးနှင့် Tele- အလုပ်
3D ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ချဲ့ထွင်ခြင်းဆိုင်ရာအမှန်တရားနှင့် Virtual Reality စနစ်
ကိုခေါ်ယခင်ဆောင်းပါး၌တည်၏ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းဆော့ဝဲ - အဖွဲ့အစည်းများအပေါ်နည်းပညာဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု ကျနော်တို့အောက်ပါဖော်ပြ:
"လွတ်လပ်စွာပွင့်လင်းသောဆော့ဝဲလ်ကိုအခြေခံသောလျှောက်လွှာများ၊ စနစ်များနှင့်ဖြေရှင်းမှုများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလောကတွင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်စဉ်များ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်အသိုင်းအဝိုင်းများ၏အလှူငွေများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းနှင့်လျှော့ချခြင်းအားဖြင့်ယနေ့နားလည်နိုင်သည်။ ပွင့်လင်းသောဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှတစ်ဆင့်အဖွဲ့အစည်းများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေသည်".
"ထို့ကြောင့်၊ လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သည်အဖွဲ့အစည်းများအားဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းမှုဆီသို့ ဦး တည်သောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့တိုးတက်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်၊ တိုး။ ကြီးထွားလာနေသောအရှိန်အဟုန်ကိုလျင်မြန်။ ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့်တုန့်ပြန်ရန်မည်သူမည်ဝါအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်မရှိပါ။ စီးပွားရေးတောင်းဆိုမှု".
ရှည်လျားသောစာရင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည် အပေါ်အခြေခံပြီးကိရိယာများ «Software Libre y Abierto» ဒါကကုမ္ပဏီတွေအတွက်နောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်၊ နည်းပညာခေတ်မီ အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာ။ ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အကြံပြုသောစာရင်း။
သို့သော်၊ ဤစာရင်းထဲသို့ထပ်မံခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုထပ်ထည့်ချင်သည် OpenIL (Open Industrial Linux)၎င်း၏တီထွင်သူအဆိုအရ၊ ထိုထက်မကသော
"စက်မှုလုပ်ငန်းအလိုအလျောက်များအတွက် open source software ကိုပလက်ဖောင်း".
နောက်ပိုင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာအသေးစိတ်ပြောမယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုရှင်းနေပြီ «OpenIL»Linux သည်ဖြန့်ဖြူးသောစက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည် NXP semiconductorလုံခြုံစိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းများအတွက်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ။
ထိုအသေချာပေါက်အတူတူပင်, သူ့အဘို့ marking ဖြစ်ပါတယ် «Software Libre y Abierto»ယခု3နှစ်အဘို့, လမ်းကြောင်းသစ်သစ်ကိုအပေါ်လုံခြုံပြီးအောင်မြင်သောတစ် ဦး အစ, လမ်းကြောင်းတစ်ခု စက်မှုအလိုအလျောက် အတွင်းပိုင်း စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေး.
ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေး ဒီဟာအခုငါတို့ရေလွှမ်းနေပြီ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုမြင်တွေ့ခြင်းနှင့်ကျင့်သုံးခြင်းနည်းလမ်းသစ်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားတဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်သွင်းပေးသည်။ မျှော်လင့်, တူညီတဲ့အားဖြင့်လိုက်ပါသွားမသာ «Software Libre y Abierto»ဒါပေမယ့် ဒနနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များလူတိုင်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာကြီးကိုရရှိရန်အတွက်တိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုပေးနဲရြိုတို dam တို in တို dam တို us တို us တို us တို us တို individ တို individ တို individ တခ term ်လ term လ us ်တ in ်တ in ်တ in ်လ in ခ in ်တ dam ်တ brings ်လ brings ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » NOTICIAS » စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေး - ဒီခေတ်သစ်တွင်အခမဲ့ဆော့ဝဲ၏အခန်းကဏ္။
Google သည် Mendel Linux 4.0 ဗားရှင်းသစ်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
LibreELEC 9.2 ဗားရှင်းသစ်သည် Raspberry Pi4ကိုအထောက်အပံ့ဖြင့်ရရှိသည်